ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့်ကွက်...
ဟိုးးးးးးးးးတုန်းက ကိုယ့်ကို အရမ်းချစ်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဦးသူဟာ "သူ့အချစ်ကို ကိုယ်က မယုံကြည်လို့" ဆိုပြီး ကြေကွဲဝမ်းနည်းစွာ ကိုယ့်ကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး အချစ်ကို ယုံကြည်စွာ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာ အဲ့ဒီအစွဲက ထင်ကျန်နေခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင် ချစ်ဖခင်ကြီးကလည်း ကိုယ့်ကြောင့် မျက်ရည်ကျခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ အဝေးကြီးကို ပထမဆုံး ကိုယ်ခွဲသွားရတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့။ ကိုယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့မနက်ခင်းလေးမှာပဲ ကိုယ့်ဖေဖေက "သူချစ်သော သမီးကြီးနဲ့ အကြာကြီး ခွဲသွားရပေမယ့် အခုလို ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာ ပြန်ဆုံခွင့်ပေးတဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ကို မျက်ရည်တွေကျပြီး ချီးမွမ်းဆုတောင်းခဲ့တယ်။" ဘဝ၊ ဘဝတွေအတွက် ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့ ပြန်ပြီး ခွဲခွာနေနေရတဲ့ အခုလို အချိန်မျိုးမှာတော့ ဖေဖေ့မှာ ခံနိုင်ရည်တွေ ရှိနေလောက်ပါပြီလေ။ ဘဝရဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြား လဲကျ ရှုံးနှိမ့်တဲ့အခါတွေမှာ၊ ဝမ်းနည်းအားငယ်လာတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ ကိုယ့်အတွက် မျက်ရည်တွေကျပြီး ဆုတောင်းပေးနေတဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်သော မိဘ၊ မောင်နှမ နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုတွေရဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို မြင်ယောင်ရင်း ကိုယ်အားသစ်တွေ ပြန်မွေးယူခဲ့ရတယ်။ အနေဝေးသည့်တိုင် အတူရှိစဉ်တုန်းကထက် မိဘစကားကို မမေ့မလျော့ ရိုသေစွာ နားထောင်လိုက်လျှောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။
ကိုယ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူလည်း သူနဲ့အဝေးကြီးကို ထွက်လာရမဲ့အချိန်မှာ ဖြေမဆည်နိုင် ဝမ်းနည်း မျက်ရည်ကျခဲ့တယ်။ ချစ်သူရဲ့မျက်ရည်တွေအတွက် ကိုယ် ဘာမှပြင်ဆင်မထားခဲ့မိဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက နှုတ်ဆက်ခွဲခွာဖို့အတွက် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် မခံမရပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်အတွက်နဲ့ ချစ်သူကျခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်ရည်တွေအတွက် "ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့အချစ်ကို လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး သစ္စာရှိရှိ ချစ်နေဖို့" ဆိုတဲ့အရာတွေ အခုချိန်ထိပါပဲ ကိုယ့်နှလုံးသားမှာ သံမှိုစွဲနေခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ကိုချစ်သောသူတွေရဲ့ မျက်ရည်စက်တွေဟာ ကိုယ့်အသိဥာဏ်တွေ မှတ်ဥာဏ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အချိန်ထိ ကိုယ့်ဘဝမှာ အများကြီး ကူညီပြောင်းလဲ အကျိုးသက်ရောက်နေမှန်း တအံ့တသြ နားလည်ခံစားခဲ့ရတယ်။
ဒီလိုပါပဲ... မနေ့ညက Facebook မှာ Blog တွေမှာ မြင်ရ၊ ဖတ်ရတဲ့ ဧရာဝတီကိုချစ်သော ဧရာဝတီရဲ့ ချစ်သူတွေရဲ့ ကျမျက်ရည်တွေ၊ ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးတွေ၊ တောင်းဆုလေးတွေကို တနင့်တပိုးကြီး ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဒီအတွေးလေးတွေနဲ့အတူ ဧရာဝတီအတွက် စကားလေးတွေ ပြောပြချင်မိတဲ့ စိတ်ကလေး ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေထဲက ဧရာဝတီမြစ်ရေစီးသံတွေဟာ "ကိုယ့်အလိုဆန္ဒမပါပဲ ကိုယ့်ကို နိုင်ထက်စီးနင်း မလုပ်ကြပါနဲ့"၊ "ဧရာဝတီကိုချစ်သော ဧရာဝတီရဲ့ချစ်သူများ ကူညီကယ်တင်ကြပါ" လို့များ ငိုယိုတောင်းပန်နေသယောင် ရင်ဘတ်ထဲထိ ရိုက်ခိုက်လို့လာခဲ့တယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာမှမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လည်းမကယ်တင်နိုင်ပါဘူး ဧရာဝတီ။ မင်းဟာ ကိုယ်တို့ တိုင်းပြည်ကို ကျက်သရေတိုးစေတဲ့အပြင်၊ ရှားပါးတဲ့သဘာဝ သယံဇာတတွေနဲ့ သတ္တဝါ အားလုံးကို အကျိုးပြုတဲ့ ကိုယ်တို့အားလုံးရဲ့ အဖိုးထိုက်တဲ့ ရတနာမြစ်တစ်စင်းပါ။
မင်းဘက်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ မင်းရဲ့ချစ်သူတွေရှိနေတယ်။
မင်းအတွက်ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေ၊ မင်းအတွက် ပြုတဲ့ တောင်းဆုတွေဟာ
မင်းကို မင်းရဲ့ရန်သူတွေ လက်ထဲ လည်စင်းခံ ပြိုကျမသွားဖို့၊
မင်းဘဝ ရှင်သန် အဓွန့်ရှည်ဖို့ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာ ကိုယ်ယုံကြည်တယ်။ မင်းလည်း ယုံကြည်နေလိုက်ပါ။ ကိုယ်တို့အားလုံးအတွက် မင်းထာဝရ စီးဆင်းပေးပါ။
ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ရာဇဝင်သံသရာတိုင် ရှင်သန်စီးဆင်းနိုင်ပါစေသား။
ဒါ တို့ပြည်၊ ဒါတို့မြေ... တို့ပိုင်တဲ့မြေ...
ဒါတို့မြစ်... ဒါတို့မြစ်... တို့အားလုံးရဲ့ ဧရာဝတီမြစ်....
အပျင်းကြီးနေတဲ့ Angel Shaper ကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်က သူငယ်ချင်း အနော် တက်ဂ်ကလေးနဲ့ သတိတရ ကြိုးစလေး ချထားပေးခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်း ခိုင်နုငယ် ကလည်း အပြင်မှာ တစ်ခါမှ အတူတူမကဲဖူးလို့ ကဲချင်ပါကြောင်း တဂ်ပိုစ့်ကလေးနဲ့ စကားလမ်းကြောင်း ဖွင့်ပေးခဲ့လို့ ဝမ်းသာအားရပဲ လတ်တလော စိတ်ဆန္ဒလေးတွေကို အခုမှပဲ မျှဝေလိုက်ရပါတယ်... (အပျင်းကြီးနေလို့.... နောက်ကျသွားတာ ခွင့်လွှတ်ကြဗျိုးးးး)
အစားချင်ဆုံး အစားအစာ - အစားဆိုရင်တော့ ကြိုက်တာလာထား။ လူနဲ့တည့်တာ မှန်သမျှ စားချင်တာပါပဲ။
နေ့တိုင်းစားဖြစ်တဲ့ အစား - နေ့တိုင်း စားဖြစ်တာ ဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ထမင်း၊ ဟင်း၊ နွားနို့၊ ကွေကာအုပ်။ (ဝတာလည်းမပြောနဲ့... အားနေရင်ကို ဗိုက်ဆာတာ... :D)
အလိုချင်ဆုံးရေမွှေး - လက်ဆောင်ရမဲ့ ရေမွှေး... ဟဲဟဲ (တစ်ခါတည်း ကြေငြာခဲ့တယ်ဟေ့)
သုံးဖြစ်နေတဲ့ ရေမွှေး - clinique happy FOR MEN (အနံ့လေးက သင်းသင်းလေးနဲ့ လန်းလို့ အရမ်းကြိုက်စ်...)
အလိုချင်ဆုံး မွေးနေ့လက်ဆောင် - မွေးနေ့လက်ဆောင်လား... အာဘွားးးပေါ့... ဟိဟိ
အလိုချင်ဆုံးဖုန်း - Quality ကောင်းကောင်း၊ ဈေးပေါပေါ...
သုံးဖြစ်နေတဲ့ဖုန်း - စကားပြောလို့ရတယ်၊ မက်ဆေ့လည်း ပို့လို့ရတယ်။။။ ကိုယ်သုံးနေတာ အဲ့လိုဖုန်း.... :D
အရူးသွပ်ဆုံးအရာ - ဂီတ
အနီးစပ်ဆုံးဂီတ - ဟော်လို ဂစ်တာ
အလိုချင်ဆုံးစာအုပ် - ကိုယ့်ကို ပညာတွေပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်မျိုး။
အခုဖတ်ဖြစ်နေတဲ့စာအုပ် - ခုတလော စာအုပ်တော့ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ မနက်တိုင်း ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ စာအုပ်ကတော့ ကျမ်းစာအုပ် နဲ့ နေ့စဉ်ခွန်အားပဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။။။
အကြားချင်ဆုံးစကား - ဟန်ဆောင်မှုတွေမပါတဲ့ အရိုးသားဆုံး စကား (အဖြူရောင်မုသားလည်း လက်မခံဘူး.. ဒါဗြဲ)
အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ - ကျန်းမာချင်တယ်။ လန်းဖြာချင်တယ်။ စိတ်သွားတိုင်းတော့ ကိုယ်မပါချင်ဘူး။ (စိတ်ဆိုတာကလည်း အခက်သားလား... မကောင်းတဲ့ဘက်ပဲ မွေ့လျော်တတ်ကြတော့လေ... အဟီးးး)
အလိုချင်ဆုံးဆု - အခုလောလောဆယ်တော့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးလိုချင်တယ်... ပြီးရင် အိမ်ပြန်မယ်။ (ဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဆုကို ခုချက်ချင်းကို လိုချင်တာပါပဲ။)
အသွားချင်ဆုံးနေရာ - ချစ်သူနဲ့ အတူတူသွားရမဲ့နေရာ (ငရဲပြည်တော့ မလိုက်ဘူး... )
သွားဖြစ်နေတဲ့နေရာ - အစားအသောက်တွေရတဲ့နေရာ၊ မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့လို့ရတဲ့နေရာ၊ ကာရာအိုကေဆိုင်၊ အနီးအနားက ရှော့ပင်းစင်တာ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း။
အကြည့်ချင်ဆုံးရုပ်ရှင် - ခုတလောတော့ ဟာသကားတွေပဲ ကြည့်ချင်တယ်။ ကြည့်ဖြစ်တယ်။
အပြောချင်ဆုံးစကား - စိတ်ရှည်သည်းခံ၊ နည်းလမ်းမှန်။ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မဟုတ်ရင်တော့ မခံနဲ့ ပြန်ဖိုက်... :D
အယုံကြည်ဆုံးလူသား - နိုးဝမ်းးး (လူနာမည်မဟုတ်... ဘယ်သူ့ကိုမှ...)
မယုံကြည်ဆုံးအရာ - ကိုယ့်ကို.... နင်ရုပ်ဆိုးလိုက်တာ၊ အသံလည်းမကောင်းဘူး၊ သီချင်းဆိုတာလည်း မတော်ဘူး၊ ညံ့လိုက်တာ၊ ပိန်းလိုက်တာ၊ အသုံးမကျဘူး၊ အဖြစ်မရှိဘူး၊ စသော စသော စကားများဖြင့် အမွှန်းတင်ခြင်းများ (ထိုသို့သောစကားများ လုံးဝလုံးဝကို အယုံအကြည်မရှိပါ...)
အမုန်းဆုံးအရာ - ဟန်ဆောင်ခြင်း၊ လိမ်ညာခြင်း
အသောက်ဖြစ်ဆုံးအအေး - ၁၀၀% Juice၊ Fresh Milk အေးအေးလေး
လတ်တလောအထိတွေ့ဆုံးအရာ - ဂစ်တာ (မတတ်တခေါက်နဲ့ ဂစ်တာပဲ ထိုင်တီးဖြစ်တယ်....... လွမ်းလို့)
မကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေး - နှလုံး၊ မျက်လုံး၊ ခေါင်းးး (အလုံးတွေပဲ မကောင်းတာ...)
အကောင်းဆုံးအဖော် - အခန်းထဲက ဂစ်တာစုတ်ကလေး တစ်လုံးရယ်၊ စက်ထဲက သီချင်းတစ်ချို့ ရယ်။
လက်ရှိအကြိုက်ဆုံးသီချင်း - Idiots ရဲ့ လူအဂီတ Albumထဲက မင်းအတွက်မင်း ဆိုတဲ့သီချင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်ပြန်နားထောင်ဖြစ်တယ်... (ကိုယ်လုံးကိုမှအားမနာ ဝမ်းနည်းအားငယ်တတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ့်ကို အားမာန်သစ်တွေပေးတယ်... အတ္တကြီးပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အကျင့်တွေကိုဆင်ခြင်ဖို့လည်း သတိပေးတယ်...)
အကြောက်ဆုံးအလုပ် - မစားနိုင်တော့တာကို အားနာပြီး အတင်းစားရတာ၊ အခြေအနေအရ မပြောချင်လည်း ပြောနေရတာ၊ မသွားချင်လည်း သွားနေရတာ၊ စောင့်စားရတာ။ (အိုးးးး အဲ့ဒါတွေပေါ့ အကြောက်ဆုံးအလုပ် အမုန်းဆုံးအလုပ်တွေ...)
တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာ - ရိုးသားမှု၊ ယုံကြည်မှု (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း တန်ဖိုးထားတယ်... အဟုတ်)
အကြောက်ဆုံးတိရိစ္ဆာန် - ဟောင်တတ်တဲ့ခွေး နဲ့ မြွေ။
တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ - လိုင်းပေါ်မှာဆိုရင်တော့ များတယ်။ အပြင်မှာတော့... ကိုဇော်၊ အုပ်ကြီး၊ ခရေတွန်၊ စစ်မင်းညို၊ မမကာရံဆူး၊ တစ်ခါမှမဆုံဖူးလို့ မကြာခင် အတူတူသောင်းကျန်းမယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နုငယ် (ကြိုပြီးပြောလိုက်ပီနော်)
အပြင်သွားတိုင်းပါတဲ့ ပစ္စည်း - လွယ်အိတ် (ဖုန်း၊ စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ ပိုက်ဆံအိတ်...)
စိတ်အညစ်ဆုံးအချိန် - ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ် လှမ်းမျှော်ကြည့်မိတဲ့ အချိန်
အနေချင်ဆုံးနေရာ - မေတ္တာတရားနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေ ရှိတဲ့နေရာ
ကြားလိုက်မိတဲ့ဟာသလေးတစ်ခု - လူယုတ်မာတွေက ကိုယ်က လူကောင်းပါ လို့ တဖွဖွ ပြောနေတာ၊ လူလိမ်တွေက ကိုယ်မညာတတ်ဘူးလို့ပြောနေကြတာ... အများကြီးပဲ... သိပ်မမှတ်မိဘူးကွယ်။။။
ပေးချင်တဲ့သတင်းတစ်ခု - ခိုးယူခြင်း၊ လုယက်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ အစိုးရသည် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကို အင်မတန် မုန်း၏။ :))))))))
အပျော်ဆုံးဖြစ်မယ့်အချိန် - ချစ်သူနဲ့ အတူတူပျော်ရမဲ့အချိန်ပေါ့ကွယ်။ ဟဲဟဲ
ကျေးဇူးပါ အနော်နဲ့ ခိုင်လေးရေ... စာရေးပျင်းတဲ့ ကိုယ့်ကို စာရေးဖြစ်အောင် သတိတရတက်ဂ်ပြီး ကြိုးစလေးတွေ လှမ်းဆွဲကြလို့နော်... နောက်လည်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် သတိတရ တက်ဂ်ဟေ့... ဟဲဟဲ... တစ်ခုတော့ကြိုပြောရဦးမယ်... ကျုပ်နာမည်ကို စာလုံးပေါင်းမှန်အောင်တော့ ပေါင်းပေးကြပါလေ... ဟွန်းးးးး
On This Very Valentine's Day!!!
Thanks To Those Who Entered My Life, They Made Me Who I'm Today!
And Just Want To Thank You All For Being There In My Life As My Great Friends!!!
Hope, Me & Every One Will Have A Genuine Valentine's Day!!!
CHRISTMAS & IT IS DONE!
ရက်၊ လတွေ တစ်ရွေ့ ရွေ့  ပြေးလွှားလာရင်းနဲ့ ခရစ်စမတ်ရာသီလေးတောင် ရောက်လာပြန်ပေါ့။ ဟိုးငယ်ငယ် ပိစိလေးအရွယ်တုန်းကတော့ ခရစ်စမတ်ရောက်ရင် မုန့်ဖိုးတွေ၊ လက်ဆောင်တွေ အများကြီးရတယ်။ အဝတ်အစား အသစ်လှလှပပလေးတွေ ဝတ်ရတယ်။ ကျောင်းတွေပိတ်တယ်။ အဝေးရောက်နေတဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့လဲ ပြန်ဆုံတွေ့ခွင့်ပြန်ရတယ်။ အိမ်မှာ၊ ဘုရားကျောင်းမှာ လူစုံတယ်။ Carol Singing လှည့်တယ်။ သီချင်းတွေ ဆိုကြတယ်။ မုန့်တွေအများကြီးစားရတယ်။ ပျော်ဖို့သိပ်ကောင်းတယ်။ ဒါဟာ ခရစ်စမတ်လို့ပဲ သိနားလည်ခဲ့ဖူးတယ်။
တကယ်တော့ ခရစ်စမတ်ဆိုတာ... ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ တစ်ခု သက်သက်မဟုတ်သလို၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ပွဲတော်တစ်ခုလည်း မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်စမတ်ဆိုတာ.... တစ်လောကလုံး ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန် " Joy To The World The LORD Is Come " လောကဝမ်းမြောက် ဘုရားကြွလာ ဆိုပြီး ကြွေးကြော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဟာ လူ့ဇာတိကိုခံယူပြီး အနိမ့်ကျဆုံး နွားစားခွက်ထဲမှာ ဖွားမြင်လာခဲ့တဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ... ခရစ်ယာန်တွေအတွက်သာမဟုတ်ပဲ တစ်လောကလုံးအတွက် မွေးဖွားခဲ့တာပါ။
သခင်ခရစ်တော် လူ့ဇာတိခံယူပြီး လူ့လောကကို ဆင်းသက်လာတာဟာ လူ့ဇာတိခံယူရုံ၊ ဆင်းသက်လာရုံ သက်သက် မဟုတ်ပဲ၊ လူသားအားလုံး လိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ရန် အတွက် သူ့အသက်တာ အားဖြင့် ဥပမာပြ သွန်သင်လိုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သခင်ခရစ်တော် လူ့ဇာတိခံယူပြီး လူသားတွေကို ကယ်ချွတ်ဖို့ စေလွှတ်ခဲ့တာဟာ အဖခမည်းတော် ဘုရားသခင်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေပဲ ဖြစ်တယ်။ သခင်ခရစ်တော်ဟာလည်း " ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ " ဆိုတဲ့ ပုံသက်သေမျိုး လုပ်မပြခဲ့ပါဘူး။ စံပြကောင်းတစ်ယောက် တကယ့်ကို " IDEAL" အဖြစ် ရပ်တည်ပြခဲ့တဲ့ အပြင် လောကမှာ ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ်၊ " နှိမ့်ချစွာ၊ ရိုကျိုးစွာ နေထိုင်တတ်ဖို့ " ပါ ရှေ့ ဆောင် လမ်းပြပြီး ခမည်းတော် ဘုရားရဲ့ အလိုတော်ကို ဖြည့်ဆည်းနာခံခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ လဆန်းပိုင်းလောက်က Down Here အဖွဲ့ ရဲ့ " How Many Kings " ဆိုတဲ့ ခရစ်စမတ်တေးအယ်လ်ဘမ်
လေးတစ်ခု သူငယ်ချင်း Benjamin LianPi က လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ စာသားတွေဟာ ငါတို့ သိနားလည်ပြီး မေ့လျော့နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြန်ပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ခွင့်ကို ပေးတယ်လို့ သူ့ခံစားချက်ကို ပြန်မျှဝေ ခဲ့တယ်။ LianPi ပြောသလိုပါပဲ ဒီသီချင်းက Angel Shaper ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို တကယ်ပဲ တို့ထိပါတယ်။ သီချင်းထဲက စာသားတွေကို ပြန်ပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်မယ် ဆိုရင်.... ဘုရင်များရဲ့ဘုရင်၊ အရှင်များရဲ့အရှင်၊ သခင်များရဲ့သခင်၊ ဘုရားရဲ့ သားတော်တစ်ယောက်ဟာ ရှိသမျှ၊ ဖြစ်သမျှ၊ ပိုင်ဆိုင်သမျှ အားလုံးကို စွန့်ပြီး အသေးနုတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နွားစားခွက်ထဲမှာ လူ့ဇာတိခံယူပြီး မွေးဖွားခြင်းခံယူဖို့ ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ခမည်းတော် ဘုရားရဲ့ အလိုဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သခင်ခရစ်တော်ဟာ အားလုံးကို စွန့်ပြီး လူသားတွေကို အပြစ်မှ ကယ်ချွတ်ဖို့ ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ အရမ်းကို ထိမှန်တဲ့စာသားလေးတွေ ဖြစ်တယ်။
Cause, How Many Kings, Stepped Down From Their Thrones? How Many Lords Have Abandoned Their Homes? How Many Greats Have Become The Least For Me? How Many Gods Have Poured Our Their Hearts? To Romance A World That Has Torn All Apart? How Many Fathers Gave Up Their Sons For me? Only One Did That For Me!
သခင်ခရစ်တော်ဟာ ကားတိုင်ပေါ် အသေမခံခင် Gethsemane မှာ ဆုတောင်းခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုကိုလည်း (Mark. 14:36) မှာ တွေ့ရပါတယ်။ အို... အဖ ခမည်းတော်၊ ကိုယ်တော်သည် အလုံးစုံတို့ကို တတ်နိုင်တော်မူ၏။ ဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မှ လွှဲတော်မူပါ။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည် အတိုင်း မဖြစ်ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော် အလိုရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသော..... ဆိုပြီး ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့သားတော်ဟာ ဘုရားသားဖြစ်ပေမယ့် လူ့ဇာတိကို ခံယူခဲ့ရတဲ့အတွက်၊ ဒီအသေခံခြင်း ဟာလည်း အသွေးအသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ သူ့အတွက် အင်မတန် ခက်ခဲနေကြောင်း ပြသထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်တော်ဟာ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်း လိုက်လျှောက်နာခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီအရာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်ဟာ လူ့လောကမှာ လူ့ဇာတိခံယူခဲ့ရုံသက်သက်နဲ့ အသက်ရှင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော် အတိုင်းပဲ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံပြီး အသက်ရှင် ခဲ့ကြောင်း ကို တွေ့ရပါတယ်။ အဖ ခမည်းတော်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေ အားလုံးကို ယခုလို နာခံလိုက်လျှောက်ခဲ့ပြီး မှသာ " IT IS DONE " " ဤအမှု ပြီးပြီ။ " ဆိုပြီး ခရစ်တော် ကြွေးကြော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီလိုဆိုရင်... တို့တွေ အားလုံးလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်တာ၊ တာဝန် အသီးသီးကို ဘယ်လိုကျေပွန်မလဲ??? ဤအမှုပြီးပြီ လို့ ကြွေးကြော်နိုင်ဖို့ရန် ဘယ်လို ကြိုးစားအသက်ရှင်မလဲ??? သခင်ခရစ်တော် ပြသခဲ့တဲ့ စံနမူနာအတိုင်း ဘယ်လို လိုက်လျှောက်နိုင်မလဲ??? အခြေခံက စပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်..... အနန္တော၊ အနန္တ ဂိုဏ်းဝင်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးအပေါ် အဓိက တာဝန်ကျေဖို့ လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
( ဧဖက် ၆း၁) မှာ ဘာပြောထားသလဲ ဆိုရင်... သားသမီးတို့ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်အညီ မိဘစကားကို နားထောင်ကြလော့။ မိဘစကားကို နားထောင်ခြင်းအမှုသည် တရားသောအမှုဖြစ်၏။ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို စွန့်ပစ်ပြီး မိဘစကားကို နားထောင်နာခံရုံမက၊ မိဘကို ပြန်ပြီး လုပ်ကျွေးပြုစုကာ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်ဖို့၊ ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ဖို့ အဓိက လိုအပ်ပါတယ်။
မိဘတွေ အနေနဲ့လည်း သခင်ယေရှု လမ်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း " IT IS DONE " ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ တာဝန်တွေ ကျေခဲ့ကြ ပြီးပါပြီ။ သားသမီးတွေကို ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးခဲ့ရုံမက၊ ညအချိန်မတော် ကလေးထငိုရင် အိပ်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကို ချိုးနှိမ်ပြီး အိပ်ယာထနို့တိုက်ပေးခဲ့တယ်။ အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးခဲ့တယ်။ သားသမီးတွေအတွက် အပင်ပန်းခံပြီး လုပ်ကျွေးပြုစုပေးခဲ့တယ်။ မိဘတွေရဲ့ အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူး။ မိဘတွေဟာ မိဘနေရာကနေ " IT IS DONE " နိုင်ခဲ့ကြသလို၊ သားသမီးတွေ အနေနဲ့လည်း မိဘကို လစာလေး တွေ အပ်၊ ငွေလေးတွေ ပို့ ပေးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ အဆုံးစွန်ထိပြောရရင် မိဘကို ရွှေဘုံပေါ်မှာ ဇိမ်ကလေးနဲ့ ထားနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်ပြီ လို့ ဆိုလို့မရပါဘူး။ မိဘကျေးဇူးကို မဆိုထားနှင့် မိဘတွေ သားသမီးအပေါ်မှာထားတဲ့ မေတ္တာတရားတစ်ခုတည်းနဲ့တောင် မညီမျှနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီတော့... သားသမီးတွေ အနေနဲ့ အသက်ကြီးလာမဲ့ မိဘတွေကို နားလည်စွာ ချစ်ခင်ရိုသေနိုင်ဖို့ လိုအပ်သလို၊ မိဘစကားကို နားထောင် ရုံမက ကိုယ့်ရဲ့ အလိုဆန္ဒတွေကို ချိုးနှိမ်ပြီး ပေးဆပ်နိုင်ဖို့၊ မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်အောင် တစ်သက်လုံး ကြိုးစားသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်လေးဟာ ခရစ်စမတ် ဆိုပြီး ခရစ်စမတ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုလို့ ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ခရစ်တော် မွေးဖွားလာတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဒီခရစ်စမတ်လေးရဲ့ အဓိက ဆိုလိုရင်းကို သေချာတွေးကြည့်ခံစားပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ X'mas ဟာ Fulfillment Of Christ ရဲ့ အစဖြစ်တဲ့အတွက် ခရစ်တော် ပုံသက်သေကောင်းပြသခဲ့သလို တို့လူငယ်လေးတွေလည်း မိဘစကားကို နားထောင် နာခံပြီး ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ဖို့၊ မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင် အသက်ရှင်ကြဖို့ ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်လေး ဖြစ်လာဖို့ Idea နဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ U Mang Sen ကို ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ရှိပါကြောင်း.....
ဘုရားသခင်ထံမှ လာတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စုံလင်ပြည့်စုံခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကြွယ်ဝခြင်းများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ Angel Shaper ရဲ့ မောင်နှမအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးပဲ Merry Christmas And Happy New Year ပါ။
လူတိုင်းအတွက်တော့ အဖေဆိုတာဟာ အားကိုးရာ ဟီးရိုးကြီးပါ။ ငါကြီးလာရင်တော့ ဖေဖေ့လို ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်။ လူတွေကို လေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ပြီး လူပီသရမယ်။ ကူညီတတ်ရမယ် ဆိုတာတွေဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်သူမှ သင်ပေးစရာမလိုပဲ စိတ်ထဲကနေ ဖြစ်ချင်လာတဲ့ ဆန္ဒတွေပေါ့။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့ ရှုံးလာတယ်၊ ခံလာရတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံး ကျည်ဆန်ဖြစ်တဲ့ ငါ့အဖေနဲ့တိုင်မယ် ဆိုတဲ့ စကားမျိုးတွေကိုလည်း အဖေကို သိပ်အားကိုး တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ပြောထွက်မိတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ သရဲကြောက်လို့ ဖြတ်မသွားရဲတဲ့လမ်းကို ညအမှောင်မှာ ဖေဖေနဲ့သွားရရင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကြောက်စိတ်တွေ မရှိတော့တာဟာလည်း အဖေဟာ ကိုယ့်အတွက် သူရဲကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပေါ့။
အဖေတွေကတော့ ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ချော့သိပ်ဖြစ်ချင်မှ ချော့သိပ်ဖြစ်မယ်...............လိုအပ်မှုမှန်သမျှကိုတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ သူတို့ရင်ထဲမှာ တံဆိပ်ခတ်ထားပြီးသားပါ။ ဒီတော့ ဖေ့ဖေ့ကျေးဇူး ဆိုတာတွေ ကို ကဗျာတွေ စာတွေ ဖွဲ့လည်း ဖွဲ့မမီပါဘူးလေ။
ဒီနေ့ ၂၀.၆.၂၀၁၀ ဟာဖခင်များနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ဖခင်များနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုတော့ မအားလပ်မှုတွေ ကြောင့် မျှဝေမပေးနိုင်ပါဘူး။ Angel Shaper မှာ အဖိုးနဲ့ ဖေဖေ့အပြင် ဦးလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ မွေးစားဖခင်တွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ အကိုတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အဖေတစ်ယောက်လို ဆိုဆုံးမပေးတဲ့ ဆရာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ပါပါးလို့ သမီးခေါ်တဲ့ ရန်ကုန်က ဆရာ Kevin Moe၊ အမေရိကားက ဖေကြီး အောင်သာငယ်၊ ဒူဘိုင်းက ဘကြီးမိုး လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုမိုးဇော်လွင်၊ ဘကြီးသာလို့ခေါ်တဲ့ ကိုသာယာ၊ မလေးရှားက ဦးတည် (ကိုသောမတ်စ်)၊ ဖခင်နေရာ မရောက်သေးတဲ့အကိုတွေ၊ ကြိုးစားနေသူ အကိုတွေလည်း အများကြီးပါ။ (ဖခင်ဖြစ်ပြီးသူများသာ နာမည်ဖော်ပြသည်) အားလုံးဟာ ဘုရားပေးတဲ့ အမျိုးတွေပေါ့။ သမီးအရင်းတစ်ယောက်လို ဂရုတစိုက် ဆိုဆုံးမကြတယ်။ ကူညီကြတယ်။ အားပေးကြတယ်။ ဖေးမပေးကြတယ်။ မေတ္တာ၊ စေတနာတွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးလည်း အများကြီး တင်ပါတယ်။ အဖိုး၊ ဖေဖေနဲ့ မွေးစား ဖခင်တွေ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖခင်တွေအားလုံးကို သီချင်းလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပိုစ့်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဂါရဝပြုဖို့ စိတ်ထဲရှိနေပေမယ့် အချိန် အင်မတန် ဆင်းရဲသွားတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနှစ်က ဖခင်များနေ့မှာ ဖေ့ဖေ့အတွက်ဆိုပြီး ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးနဲ့ပဲ အားလုံးကို ဂါရဝပြုလိုက်ရပါသည်။
There Are Not Many Words
To " Thank You " For All That You Have Done.
You Go Out Of Your Way To Help The People
You Came Across Each Day And You Surely Become Richer With
The Blessings You Gather Along The Way.
You Showed So Much Concern And
Helped Me In Every Way You Could,
And It Is True That Only Because Of You,
The Tests Of Life, I Stood On My Own.
And While I Keep Wondering
How You Manage To Help Others Always,
This Note Of Gratitude Comes Your Way
To "Thank You" For Brightening My Days.
I Love You Daddy, You Are My Hero!!!!!!!!!!!!!!!
On This Special Father's Day, May God Bless You Dad!!!
မနေ့ညက ထူးဆန်းတဲ့ ပိတ်ကားတစ်ခုမှာ အမှတ်မထင် မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ ပေါ့။
ညနေခင်း မိသားစုတွေ စနောက်ရင်း တီဗွီထိုင်ကြည့်ချိန်မှာလည်း ငါ........မပါဘူး။
လူစုံတက်စုံ ဆွေးနွေးရင်း တိုင်ပင်ကြတဲ့ စကားဝိုင်းမှာလည်း ငါ...........မပါဘူး။
မိသားစုရဲ့ တစ်နိုင်စီးပွားကို စုစုစည်းစည်း လုပ်နေကြချိန်မှာလည်း ငါ...........မပါဘူး။
ရပ်ကွက်ထဲက သာရေးနာရေး အမှုကိစ္စတွေအတွက် ရပ်ကွက်လူငယ်လေးတွေ စုစည်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာလည်း ငါ................မပါဘူး။
ငါ..... ငါ..... ငါ.... ငါဘယ်တွေရောက်နေတာလဲ?
ငါ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ..... င့ါကိုယ်ငါ ပိတ်ကားတွေနောက်မှာ ရှာဖွေနေရင်းးး
ဟော................. ငါ..... ငါ... တစ်ယောက်တည်းပါလားးး
တစ်ယောက်တည်း ဆာလောင်မှုအတွက် မုန့်ဝယ်ထွက်ချိန် ဘေးကနေ ပိုက်ဆံလိုက်ရှင်းပေးမယ့် အဘွားလည်း ရှိမနေဘူး။
တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန် အားငယ်လို့ ဆုံးရှုံးနာကျင်နေချိန် အားပေးနှစ်သိမ့်ပေးမဲ့ ဖေဖေလည်း အနားမှာမရှိဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ ဝေရာဝိစ္စတွေအကုန် လုပ်ပေး၊ စားချင်တာကို ချက်ကျွေး၊ လုပ်ချင်တာတွေကို အားပေးတတ်တဲ့ မေမေလည်း မရှိဘူး။
ဖျားနာနေချိန် ဆေးခန်းလိုက်ပို့၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ မသောက်ချင်တဲ့ဆေးတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လိုက်တိုက်မဲ့ အဒေါ်လည်း မရှိဘူး။
ကိုယ်ပြောသမျှကို စိတ်ဝင်တစား ပြုံးပြုံးလေးနားထောင်ပေးမယ့် ဦးလေးလည်း အနားမှာ မရှိဘူး။
လိုချင်တာကို မရရအောင်ဝယ်ပေး၊ စားချင်တာတွေကို ဝယ်ကျွေးမဲ့ ဒေါ်လေးလည်း မရှိဘူး။
ကိုယ့်အပေါ်အနွံတာခံတတ်တဲ့ ညီမလေးလည်း ပျောက်နေတယ်။
သီချင်းတွေဆိုပြ ကပြပြီး၊ တစ်ခါတလေ စိတ်တိုအောင် လိုက်စတတ်တဲ့ မောင်လေးလည်း မရှိဘူး။
အလိုမကျလို့ စိတ်ကောက် စိတ်ဆိုးနေချိန် ချော့မော့ပေးမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အနားမှာ မရှိဘူး။
ငါ့တစ်ယောက်တည်း ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့ လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း လဲလိုက် ထလိုက် နဲ့။
တင်းထားလိုက်ရတဲ့အားတွေများ တင်းဖန်များတော့ ပြတ်ချင်ချင်.......
အော်.... ငါ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်နေတာပါလား........ ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ်တွေ မှတ်ဥာဏ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ထိ
အဲဒီအိပ်မက်ဆိုးကိုပဲ စိတ်နာနာနဲ့ ဆက်မက်နေရဆဲ........